Isahluko 13 Ukubhengezwa kwamatyala-i-NJ kunye ne-NY yearhente yeZindlu, ayifunayo, uKhuselo lokuBhengeza kunye namaGqwetha asebambiseni
ikhaya / Isahluko 13 Ukubhengezwa
Isahluko 13 ukubhengezwa kwamatyala kuya kuyekisa ukuxelwa kwangaphambili. Xa ufaka iSahluko 13 ukubhengezwa, awuzukuphulukana nayo nayiphi na impahla kwitrasti ebambeleyo xa unakho ukuhlawula. Ukuba awukwazi ukwenza iintlawulo zakho okanye ucwangcise ukunciphisa ilahleko unokugcina umzi wakho ekuvezweni.
Ukuba ukhutshiwe kwixa elidlulileyo ukuze uguqulwe ngemboleko-mali, isahluko 13 sinokunika enye ingxelo ngokutshintsha. ENew Jersey isiqendu 13 ukubhengezwa kwamatyala okuvumela hlawula i-60% yenqununu yakho kunye nenzala kunye ne-100% yeescrow yakho kumbolekisi wakho ngelixa kunciphiso lwelahleko. Amatyala akho asemva kwexesha ahlawulwa ngokuhlawula amatyala akho nge-60 ukuze ukuba ugcwalise isicwangciso sakho se-13 kwisithuba sonyaka we-5 amatyala angahlawulwayo ekupheleni. Isahluko se-13 trustee sihlawulelwe i-10% yeentlawulo zakho ukuhlawulela iinkonzo zabo. Ukuba unemibuzo thetha negqwetha lezokuzivikela le-NJ elikuqonda ukubhengezwa.
Iiofisi zomthetho zikaPatel, uSoltis, noCardenas
I-00: 25 12 Sep 19
Ndiyayibulela kakhulu inkonzo endiyifumanayo ngokubhekisele kwimeko yam. Umnumzana Patel kunye nabasebenzi bakhe banobubele kwaye bezele ekwenzeni konke abanako ukundinceda kwimeko yam. Ndihlala ndibizwa ukuba ndicebise malunga necala lam kunye nento ekufuneka siyenzile ukuya phambili. Umnumzana Patel unditsalele umnxeba ngokuthe ngqo qho endicebisa. Ndiyalubulela lonke uncedo nenhlonipho endiyifumanayo malunga netyala lam. Le femu yomthetho ibakhathalele abaxumi bayo ngentlonipho nangobungqingqwa ... Ndiyahlonipha uMnu Patel kunye nabasebenzi bakhe kwaye bajonge phambili ekuqhubekeni ngethemba kunye nokholo kuMnu Patel. Olona lononophelo lwabathengi. Iindlela zokuziphatha eziNgcono. Ndoneliseke kakhulu nguMnu Patel kunye nabasebenzi bakhe abaMangalisayo. Ndiya kuwukhuthaza lo mthetho uqine kubahlobo bam y usapho lwam ngokuqinisekileyo. Enkosi Mnu Patel kunye naBasebenzi bakho. Uxolo kubo bonke. U-Edward Stack Teaneck, NJ🙏
I-17: 33 11 Sep 19
IiOfisi zoMthetho zePATEL, SOLTIS kunye neCARDENAS kuphela kweOfisi zomthetho ezingacebisa nakubani na ofuna iinkonzo zomthetho. Babeluncedo ukususela ngoku baphendulwa umnxeba wam okokuqala ngqa. Ukuba ngaphambili i-4 ezinye iziQinisekiso zoMthetho zichitha nje ixesha lam, imali kwaye yenze imeko yam ibe mandundu. Ndiludinga ngokwenene uncedo ngokukhawuleza! IiOfisi zomthetho zePATEL SOLTIS NECARDENAS zikwazile ukulungisa imeko yam yezomthetho kwangoko. Enkosi kakhulu! UAida S.
I-17: 49 14 Aug 19
Umnumzana Cardenas wenze into engenzeki kum. Andikaze ndinenkonzo engcono. Ububanzi nobunzulu bamava akhe babemangalisa. Kwiminyaka emibini umkhuluwa wam wabaphatha kakubi abazali bethu kwi-NJ nakwi-NY. Kuba ndise phesheya kwezilwandle andicingi ukuba ndingayenza into ngayo. Nangona kunjalo, uMnu. Cardenas wakwazi ukulwa egameni lam ukuze umntakwethu ayeke ukubiwa kwezi zixeko. Zombini ezi mpahla zidwelisiwe ngoku zithengisiwe kwaye umntakwethu unyanzelekile ukuba abuyise imali awayeyithathile. Wonke umntu wosapho lwam wanelisekile, ngaphandle kwakhe. Umnumzana Cardenas wamangalisa.
I-16: 16 09 Aug 19
Olu hlaziyo lukaMnu Patel. Ndiqinisekile ukuba wayenakho ukundinceda kwimeko endikuyo. Ndikhe ndaya kwabameli babini bokungabinamali ngaphambili, kwaye andiqondi ukuba ityala lam libandakanyeke okungakumbi. Kwakukho umba wokuchazwa kwangaphambili, kunye nomcimbi wefa ekufuneka ndijongane nawo. Yena neqela lakhe lonke bakwazile ukujongana namatyala am kwaye andikwazi ukubabulela ngokwaneleyo. Ndinqwenela ukuba bendizifumene kwakamsinya. Qhubeka nomsebenzi omuhle guys. Enkosi kakhulu.
I-14: 36 24 Jul 19
Igqwetha uLazaro Cardenas ngumntu othunyelwe nguThixo. Imeko yethu iyinkimbinkimbi kwaye bendingaqinisekanga nokuba indlu kamama ingasindiswa. Kwakukho iingxaki ezininzi kangangokuba ndandisoyika ukuba umntakwethu uza kuphulukana nendlu. Igqwetha uCardenas laliqinisekisa kakhulu. Wayeqinisekile ukuba asizukuphulukana nendlu kwaye wayenyanisile. Kuthathe phantse unyaka kuphela ngenxa yenkqubo ebandakanyekileyo ekufakweni kwamaxwebhu, iirekhodi ezibuyisiweyo, nayo yonke enye into elindelekileyo ekufumaneni ubunini buye kumnakwethu kunye nam. Ukunyaniseka, andiqinisekanga ngenkqubo yokwenyani kuba igqwetha likaCardenas kwaye iofisi yakhe yayikhathalela yonke into. Xa wayeva ukuba inkampani ebambela imali ibambezeleka inkqubo, yacebisa ukuba sizifumanele imali yethu kwaye yandithumela kwiqabane elalincedayo kwaye linomonde kakhulu kwaye lihoye iimfuno zethu. Ngalo lonke eli xesha wayekhangela kwinkqubo yokuxhasa ngezimali ukuqinisekisa ukuba asithathi ndawo. Wayesoloko ephezu kwento yonke. Yazi wena, uyindoda exakekileyo. Kodwa akazange awasuse amehlo akhe kuthi. Uye wakhangela kwisivumelwano sokubolekwa imali ukuze aqiniseke ukuba siyifumana kakuhle imali. Izolo ngoJulayi 23rd, sivale kwikhaya lethu. Ngokwethu ngokusemthethweni. Bendinawo amathandabuzo apha endleleni, bendiziswa kukungayazi kwale nkqubo kodwa igqwetha i-Cardenas belisoloko libeka uloyiko lwam. Andinombulela kunye neofisi yakhe ngokwaneleyo ngokusinceda ukuba silondoloze ikhaya lethu. UThixo makazisikelele iiOfisi zomthetho zikaPatel, uSoltis, noCardenas!
I-12: 58 16 Jul 19
Uhambe ekhathazekile kwaye edidekile ... ushiye eqinisekile kwaye ezaliswe lwazi. Ndidibene noLazaro Cardenas, kodwa abanye bacela uncedo lwabo. Bandigcinele imali nexesha ... Bekulungile ukuba ndiye kubo,
I-13: 18 06 Aprili 19
Umyeni wam kunye nam okwangoku sikwimeko yokuzama ukuthengisa indlu yethu eNAF. Ngoku sihlala kwaye sithenge ikhaya kwelinye ilizwe. Ukuqeshwa komyeni wam ukule meko ke sathatha isigqibo sokungaphindi sibuyele endlini e-NJ. Intengiso ethe kratya yawa kwinyanga engaphambi komhla wokuhlawulwa kwayo kwaye yajongana nokuxelwa kwangaphambili kwaye ndizibuza ukuba ingaba loluphi uhlengahlengiso olo lwaluya kuba kwelona tyala lam ndililungileyo. Ndifikele kule ofisi yomthetho kwaye ngokukhawuleza ndatsalelwa umnxeba nguDerek Soltis. Emva kokuchaza izinto ezibaxhalabisayo, ngomonde uthathe ixesha lokuba ndihambe ngeendlela zam nokuba yintoni kwaye yintoni ebingenakwenzeka. Emva kokuthetha naye ndaziva ndinesiseko kwaye ndicace gca ukuba mandenze ntoni olandelayo. Ndimele nditsho ukuba kunqabile ukufumana ingcali evumayo ukukucebisa mahala. Ngokuqinisekileyo ndiya kuqonda kwaye ndiza kufikelela kuMnumzana Soltis ukuba ndifuna ukuba nabameli bezomthetho kwixa elizayo. Enkosi Derek kwaye ngamashishini akho angasikeleleka.
I-23: 32 12 Mar 19
U-Lazaro Cardenas wenza umyolelo omtsha, amandla egqwetha, kunye nommeli wokukhathalela impilo. Walungisa ishedyuli yam ngokuhlala emva kweeyure zomsebenzi eziqhelekileyo, wachaza yonke into ngokupheleleyo, akazange angxame, wayenentlonipho ngeminqweno yam, njalo njalo. Wonke umntu endiye ndadibana naye eofisini wayemnandi. Ndincoma le firm, kunye noMnu Cardenas, ngakumbi ngaphandle kokubhuka.
I-16: 24 27 Feb 19
Ndibizele iofisi yezomthetho ngale ntsasa kwaye bendonwabele ukuthetha noGqwetha uCardenas. Uthathe ixesha lokumamela eli tyala bendilibeka, khange andibambise. Emva kokuva bonke ubungqina wandixelela ukuba ndinelinye ityala elinzima kakhulu lokuphumelela kwaye ndaliwe ukulithatha. Ndiyibulela kakhulu intembeko yakhe kunye nokuba engazange azame ukundinika ithemba lobuxoki ukuze athathe imali yam. Inqabile le mihla. Ndiyayincoma kakhulu le firm.
I-13: 32 14 Feb 19
Amava amangalisayo noDerek Soltis. Ndakwazi ukufumana ingcebiso eneenkcukacha kwaye engabalulekanga. Umnumzana Soltis unolwazi kwaye uyangeneka. Ndikwabenethuba lokuthetha nabanye abameli kule femu ndiyasebenza. Kucetyiswa kakhulu.
U-Audra de Falco
I-20: 20 07 Nov 18
Ndibabizele ukuba babonisane kwaye ndifuna ukubabhatala ngexesha labo. Benqaba ngenceba. Omnye wabameli uchithe malunga nesiqingatha seyure kwifowuni kunye nam ngaphandle kwentlawulo, ehamba kum ngokusebenzisa iindlela zam kwaye eneneni kunye nam! Ndakwazi ukufumana iimpendulo endizifunayo, kodwa ukuba bendifuna ukubandakanyeka kwiinkonzo zabo ngokusemthethweni andinakuthandabuza ukuba bazokukhawuleza, banobuchule kwaye banobungcali. Enkosi ngexesha lakho!
I-16: 34 11 Aug 17
Olu hlaziyo lunga-Derek Soltis - ndingumnini wepropathi kwi-NYC kwaye ndaba nomba wokuvezwa kwezinto ngaphambili kwisakhiwo esinye sezakhiwo zam. Ngomnxeba umnumzana Soltis undinikile isikhokelo sokusombulula ingxaki le ngaphandle kokumqasha njengegqwetha. Inkqubo yayiqonde ngqo ngaphambili kodwa yayingaziwa ndim. Ngengcebiso kaDerek ndakwazi ukujongana nalo mbandela. Uthathe ixesha ukundifundisa ngokufutshane kwi "nkqubo" kwaye wandikhokelela kwicala elifanelekileyo. Ndiyayihlonipha into yokuba uMnu Soltis endincedisile isikhokelo kwaye khange ndicele ntlawulo nangona ibilixesha lokuqala ukuthetha nam. Olu luphawu lobuchwephesha bokwenyani. Andizukuthandabuza ukunxibelelana noDerek Soltis kwixa elizayo ukuze andimelele kwimiba yezomthetho.
I-12: 50 03 Aug 17
Kwathunyelwa uMnu Patel ngumhlobo. Ndandinenkxalabo malunga nelifa likaMama. Bakwazi ukundenza ndibelwe njengomgwebi. Undincedile ukuba ndimtshintshele ekhaya ndiye kwiSista yam kunye namagama endinguye. Wayesebenza nam kuyo yonke imibuzo endandinayo. Wayekwazi ukuthetha nam ngenye yezona zinto zinzima kwezakha zenzeka ebomini bam.
I-08: 52 26 Jul 17
Iqela ePatel naseSoltis lihle kakhulu. Bayingcali kuzo zonke izinto zomthetho wokuthengiswa kwezindlu. Bancedile mna nomyeni wam sathenga ikhaya lethu, elalibandakanya inkqubo enzima nedinisayo yokuthengisa ixesha elifutshane. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngekhe senze isivumelwano ngaphandle kwabo. Banentlonipho, bayaphendula kwaye banolwazi. Ndincoma ngaphandle kokubhuka.
I-09: 14 15 Jul 17
Ndiphume nje emnxebeni kunye noDerek Soltis kwaye ndichukumisekile kwaye ndinombulelo kuba ndimfumene. Ndandinemibuzo embalwa yokuqala ngaphambi kokuba ndifike kuye kwaye wayiphendula NGOKUKHULU. Asingabo bonke abameli abaza kunyaniseka xa into kufanelekile ukuba iqhubeke phambili .... kodwa uDerek unyanisekile kwaye undenze ndaziva kamnandi. Ndingacebisa kakhulu le ofisi yezomthetho isekwe kwincoko yam noDerek. Unobubele, unyanisekile, uyacacisa, kwaye uyakhathala. Ngoku ndiyathemba ukuba ikhona into eyenzekayo apho ndifuna ukuqesha igqwetha kuba ndiza kuqesha uDerek ngokuqinisekileyo. Enkosi kakhulu ngengcebiso yakho Derek! Umzi mveliso ufuna abameli abaninzi njengawe
I-14: 13 30 Jun 17
Umnumzana Patel ubeluncedo kakhulu kwityala lam lokuchazwa kwangaphambili. Uphendule imibuzo emininzi malunga netyala. Uye waxubusha ngokweenkcukacha kwaye ndivuya kakhulu ngamava am. Enkosi kakhulu kwaye wenze kakuhle umsebenzi. George
Ukuthengisa kufutshane vs ukuhlawula kufutshane vs ukubonakaliswa: kunye nezinye izinto onokukhetha ukuzazi